Ungabhalisa kanjani? - Isikole Sezilimi Eziphakathi, eCambridge
Khokha idiphozi (inkokhelo kanye nemali yokuhlala isonto eli-1) bese sizobekisa inkambo yakho bese sihlela indawo yokuhlala.
Sizoqinisekisa inkambo yakho nendawo yokuhlala lapho sithola idiphozi yakho futhi sikuthumelela incwadi yokwamukela. Uzodinga lesi sitifiketi ukuthola i-Visa Yomfundi wase-UK. Imininingwane engaphezulu ingatholakala ku- Ikhasi Lolwazi lwe-Visa.
Ukukhanselwa ngenxa yemikhawulo yeCovid - noma iyiphi inkambo noma indawo yokuhlala engasetshenziswanga izobuyiselwa ngokuphelele.